Home Wararka Degaan Doorashada oo hal magaalo noqoneysa & Farmaajo oo laga tashaday.
[XOG] Degaan Doorashada oo hal magaalo noqoneysa & Farmaajo oo laga tashaday.
Mid ka mid ah qodobada ugu adag ee la doonayo in laga beddelo heshiiska doorashada ayaa la kulmay caqabad xooggan oo kaga timid dhanka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taasi oo fashilisay isku dayo ay wadeen qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada iyo ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Previous articleRW Rooble ma Dhibbanaa misa waa Dhagarqabe Farmaajeysan?
Next articleXaaf “Hadii Dir waqooyi siin weydo Fiqishini kursiga Aqalka Sare, anagana kooda koonfureed ayaan xoogaynaa”
Maxeey tahay sababta Hotel Dayax kaliya loogu ogolaaday in lagu qabto...
Faroole oo noqday Senatarkii ugu horeeyay oo la soo doortay